NCS FAQ ee loogu talagalay dhalinyarada iyo waalidiinta / masuulka - Bulshada Element
waxay aaminsan yihiin dhalinyaradu inay gaaraan kuwa aan la rumaysan karin
Ku biir Kooxda Kooxda Xubinta
Khariidadda Sheffield Youth Charts
Saxeex siinta NCS
Horey Loo Saxeexay?
Halkeen ka heli karaa liiska baakooyinka?
Xagee barnaamijkee ayaa dhici doona?
Ma u saxiixi karaa NCS saaxiibaday?
Telefoonada gacanta ma la oggol yahay NCS?
Dhallinyaradu ma u baahan yihiin inay keenaan baco hurdada?
Cunto noocee ah ayaa la bixiyaa?
Liistada baakadka waxay ku jirtaa Nidaamka Xagaaga ee xagaaga / Jiilaalka ee aan u dirno dadka dhallinyarada ah iyo waalidkood / masu'uuliyiin leh meelo la xaqiijiyay *. Waxaan kuwan u soo dirnay qiyaastii hal bil ka hor bilowga barnaamijka.
Haddii aadan weli helin Hagahaaga xagaaga ee NCS / Deyrta, weli waxaad riixi kartaa xiriirka hoose si aad u aragto version online oo ay ku jiraan liiska xirmada.
Nidaamka NCS ee 2017 Summer
Waxaa laguu oggol yahay inaad soo qaadato hal shandad iyo hal shandad maalintii. Baagooyin kale oo dheeraad ah ayaa laga rabaa in laga tago, markaa fadlan sii xayndaabka xajmiga. Fadlan iskuday inaad iska ilaaliso adoo isticmaalaya boorso weyn sababtoo ah meel bannaan oo gaar ah.
Dhallinyaradu waa inayan keenin waxyaabo mamnuuc ah sida aalkolo, daroogo kasta oo sharci darro ah, alaabo sharci darro ah, muraayado ama hub iyaga oo ku jira NCS. Waxaan dhallinyarada ka codsanaynaa inay ixtiraamaan sharciyadan maxaa yeelay waxaa jiri doona cawaaqib haddii la ogaado inay haysato mid ka mid ah shaygan.
Fadlan ogow in aanan awoodin in aan caymisno alaabta shaqsiyadeed. Sababtan awgeed, waxaan kugula talineynaa inaadan keenin waxyaabo aan qaali ahayn ama qiimo jaban.
Barnaamij kasta oo NCS ah wuxuu ka dhacaa gudaha UK.
Sanadihii hore, dhallinyaradu waxay u safrayeen goobaha sida Scotland, Cumbria, Kent iyo Wales loogu talagalay mashruuca 1 ee barnaamijka.
Wejiyada 2 iyo 3 ayaa badanaaba ku yaal meel u dhow degaanka kuyaala degaanka, inta badan masaafada safarka ah ee guriga ama dugsiga, hase yeeshee taasi way kala duwan tahay dhallinyaradu waxay ka sii dheeraan karaan guriga.
Waxaanu soo dhajin doonaa jadwalka macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha saxda ah qiyaastii hal bil kahor taariikhda bilawga barnaamij kasta marka dhammaan goobaha la xaqiijiyo.
Ka-qaybgalayaashu waxay u baahan doonaan inay u safraan meel ku-meel-gaadh ah kuwaas oo inta badan ku yaal ama ku dhow agagaarka degaanka. Ka dib waxaan qabaneynaa safar si aan dhalinyarada ugu qaadno meelo kasta oo ka fog. Dhalinyarada iyo waalidkooda ama masuuliyiintooda ayaa mas'uul ka ah inay abaabulaan safarkooda dhibcaha kulamada iyo meelaha laga soo galo waqtiyada lagu muujiyey jadwalkooda.
Dhallinyaradu waxay isku qori karaan asxaabta, iyo haddii ay dalbanayaan taariikh isku mid ah oo isla goobta ah isla markaana ay doortaan xirfad Xasuus ah 2, waxay haystaan ​​fursad wanaagsan oo ay ku jiri karaan isla barnaamijka. Marka ay labaduba saxiixaan, dhallinyaradu waxay nala soo xiriiri karaan inay na weydiistaan ​​inay ku jiraan barnaamij isku mid ah ama qol wadaagaan. Waxaan u baahan doonaa inaan ogaano magacyada saaxiib walba oo aan samayno intii ugu fiicneyd si aan tan u tixgelino. Inkasta oo aynaan dammaanad qaadi Karin, saxiixista hore waxay kordhin doontaa fursaddooda!
NCS waa hab weyn oo lagu la kulmo dad cusub iyo sameysato saaxiibo cusub! Fiiri fiidiyowgeena halkan.
Dad badan oo dhalinyaro ah ayaa ogaaday in inkastoo lagu meeleeyay koox ka duwan kooxo kale ama macaamiishooda saaxiibadood, barnaamijku wuxuu laftiisa u yahay inuu la kulmo dadka cusub iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa kooxeed iyo in ay ku xigeenadooda waayeelka yihiin qof aad u fiican marka ay hubinayaan. Waxaan kaliya oo u oggolaanaynaa tiro yar oo dhalinyaro ah oo ka mid ah dugsi kasta oo barnaamij kasta ah, sidaas darteed barnaamijku wuxuu noqon doonaa markii ugu horreysay ee dhalinyaro badani ay is kulmaan. Dhamaan barnaamijka, iyo gaar ahaan bilowga, waxaa jiri doona ciyaaro badan oo kooxo iyo ciyaaro si loo hubiyo in qof kastaa uu barto dhallinyarada kale ee kooxdooda.
Intaa waxaa dheer, dhallinyaro badan ayaa sheegaya in mid ka mid ah qaybaha ugu fiican ee barnaamijka NCS uu la kulmay dad badan oo cusub iyo sameynta saaxiibo cusub. Halkan riix si aad u aragto qaar ka mid ah waaya-aragnimadayada hore. Ma awoodno inaanu bixinno macluumaad ku saabsan kooxda dhalinyarta kooxda la geyn doono, maadaama kooxo barnaamij kasta loo qoondeeyey kaliya maalmo dhowr ah ka hor inta aan barnaamijku bilaabmin. Dhallinyarta ayaa ogaan doona kooxda ay ku jiraan maalinta koowaad ee barnaamijka.
Fadlan ogow in hoyga NCS uu yahay hal jinsi ah sidaa darteed ma aqbali karno codsiyada qolka wadaagga ee dhalinyarada ee gabadha kala duwan.
Telefoonada moobayl ayaa loo oggol yahay barnaamijka NCS?
Dhalinyarada waxaa loo oggol yahay in ay soo qaadaan taleefannadooda gacanta (iyo fiilooyinka) iyaga oo ku jira barnaamijka NCS waxayna awoodi doonaan inay isticmaalaan marka waxqabadyo aan la qaban (iyadoo la isticmaalayo telefoonnada gacanta inta lagu jiro wakhtiga firaaqada looma oggola). Fadlan la soco inaysan marwalba heli karin telefoonka gacanta, gaar ahaan inta lagu jiro Xajka 1 kaas oo badanaa ku salaysan baadiyaha.
Dhamaan hoygayaga waxay la yimaadaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah, sida helitaanka bareegyada korontada, dabaasha, iwm. Iyadoo aan loo eegin nooca hoyga ee barnaamijkooda gaarka ah, kaqeybgalayaashu waxay heli doonaan qalabyada korontada oo sidaas darteed waa inay awoodaan in ay telefoonkooda gacanta ku soo dallacaan. Helitaanku wuxuu noqon karaa mid aad u xadidan guryaha hoyga.
Fadlan ogow in aanan awoodin in aan caymisno shakhsiyaadka shakhsiyeed sidaa darteed dhalinyaro kuwaas oo keena telefoonadooda gacanta inay sidaas sameeyaan khatartooda.
Maya, dhalinyaradu uma baahna inay keenaan bacda hurdada. Dhammaan guryahayaga waxay ku yaallaan sariiro, oo ay ku jiraan hoyga iyo qolalka. Waxaan sidoo kale ku bixinnaa gogol xero habeenkii oo dhalinyaradu ka qayb qaataan inta lagu jiro 1.
Dhammaan cuntada iyo cabitaanka waxaa la siin doonaa inta lagu jiro qaybaha degaanka ee barnaamijka (marka ay dhalinyaradu ka maqanyihiin guriga). Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad soo qaadato qadada qadada ah maalinta koowaad ee Wajiga 1 (iyo Wejiga 2 iyada oo ku xiran barnaamijyada, fadlan eeg jadwalkaaga).
Ilaa iyo inta aan ku wargelineyno baahida da 'yarta ee horeyba, waxaan ku siin karnaa cuntooyinka khaaska ah ee loogu talagalay shuruudaha cuntooyinka, oo ay ka mid yihiin halal, kareer, cuncun, vegan, iyo cunto aan lahayn gluten-free, iyo xasaasiyad cuntooyin kala duwan. Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin cuntooyinka la heli karo inta lagu jiro qaybaha degaanka. Xulashadu way kala duwanaan doonaan:
Xajmiga 1 (degaan):
Fadlan soo qaado qado qashin ah maalinta koowaad. Cuntada tamarta sare waxaa markaa bixiya xarunta waxqabadka dibadda.
Quraac: siriyaalka, quraacda la kariyey, Boorash
Qadada: sandwiches, crisps, miro
Casho: cunto kulul (tusaale, baastada, pizza, curry, chilli), salad, macmacaan
Xajmiga 2 (degaan)
Jeeg jadwalkaaga si aad u aragto haddii aad u baahan tahay inaad soo qaadato qadada qashinka ah maalinta koowaad. Cuntada waxaa markaa bixiya "Challenge" iyo "dhalinyarada" inta badan waxay isu diyaarinayaan iyaga oo qayb ka ah waayo aragnimadooda nolol madaxbannaan.
Quraac: siriyaalka, dubista
Casho: xulashada cuntada kulul ee la doortay iyo la kariyey sida koox (tusaale, sausages iyo barad la shiiday, walaaq-shiil, pizza)
Xajmiga 3 (aan ahayn degaan)
Fadlan soo qaado qado kuu gaar ah. Cuntada lama bixinayo.
Xajmiga 1 (degaan)
Wejiyada 2 iyo 3 (maalmo firfircooni, habeenkii guriga joogaya)
WAALIDIINTA IYO MAS'UULIYADAHA
Halkee ayay dhalinyaradu ku seexan doonaan wejiyada la deggan yahay?
Maxaa ka dhacaya Macluumaadka Akhriska?
Immisa ayey ku kacaysaa ka qayb qaadashada NCS?
Miyay qaar dhalinyaro ah oo barnaamijka ku socota ay leeyihiin dabeecad adag?
Yaa mas'uul ka noqon doona dadka dhalinyarada ah ee dhulka jooga?
Ka qaybqaadanayaan NCS waxay farageliyaan daraasaadka dhalinyaradeyda ah?
Sideen ku helayaa dhalinyareyga ku lug leh?
Halkee ayay dhalinyaradu ku seexan doonaan inta lagu jiro mudada degaanka?
Waxaa jira xulasho kala duwan oo la heli karo inta lagu jiro NCS (tusaale qolalka qolalka gaarka ah, teendhooyinka, yurtsyada, iyo wixii la mid ah), hoyga gaarka ahi wuxuu ku kala duwanaan doonaa barnaamijka. Faahfaahinta hoyga iyo goobaha barnaamij kasta ayaa loo diri doonaa ka qaybgalayaasha qiyaastii hal bil kahor barnaamijka bilowga.
Hoyga waxaa haya xarun firfircoon oo banaan, xarun jaamacadeed ama bixiye deegaan oo kale, waxaana jira meelo ammaan ah oo halkaa ka jira si looga dhigo deganayaasheeda sida ugu macquulsan. Labada qaybood ee haweenka iyo haweenku waxay u kala baxaan hal hoy oo hal jinsi ah looma oggola inay galaan qolalka kale.
Guryuhu waxay la yimaadaan waxyaabaha ay lagama maarmaanka u tahay sida gelitaanka dabaasha iyo korontada. Guryaha qaarkood, oo ay ku jiraan musqulo, ayaa lala wadaagi karaa dhalinyarada kale, laakiin waxay kaliya noqon doontaa ka qaybgalayaasha isku jinsi.
Inkastoo aysan jirin wakhti go'an oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay hurdaan, dhammaan dhalinyaradu waa in ay degaan u gaar ah 10.45pm. Waxaan ku talineynaa in dhalinyaradu helaan hurdo fiican habeenkii si ay u hubiyaan inay si buuxda ugu raaxaystaan ​​maalmaha soo socda!
Barnaamijyada laga bilaabo fasaxyada xagaaga:
Inta lagu jiro Wejiga 1, dhallinyaradu waxay joogaan xarunta waxqabadka dibadda ee baadiyaha. Nooca hoyga way kala duwanaan karaan. Waxay noqon kartaa meelo qoyan, oo leh safar ku meel gaar ah, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa teendhooyin ama guryo. Faahfaahinta barnaamij kasta waxaa loo dirayaa ka qaybgalayaasha qiyaastii hal bil ka hor taariikhda bilowga.
Inta lagu jiro Wejiga 2, dhalinyarada waxay la kulmi doonaan nolol madaxbannaan iyaga oo ka fogaanaya guriga oo ay cunaan cuntadooda. Mar labaad, hababka guriyeynta way kala duwanaan karaan (tusaale ahaan, waxay noqon kartaa hoyga qaabka jaamacadda ama teendhooyinka ama yurtska), iyo faahfaahinta barnaamij kasta waxaa loo dirayaa ka qaybgalayaasha qiyaastii hal bil kahor barnaamijka bilowga. Inta lagu jiro Wejiga 3, dhallinyaradu waxay habeen kasta guriga joogi doonaan.
Barnaamijyada laga bilaabo xilliga nuska ah:
Inta lagu jiro Wejiga 1, dhallinyaradu waxay joogi doonaan xarun dhaqdhaqaaqa dibadda ee baadiyaha. Nooca hoyga way kala duwanaan karaan. Waxay noqon kartaa meelo qoyan, safar socdaal ah oo habeenkii ah, ama waxay noqon kartaa yurts (teendhooyin wareeg ah), ama hoy ku daboolan. Faahfaahinta barnaamij kasta waxaa loo dirayaa ka qaybgalayaasha qiyaastii hal bil ka hor taariikhda bilowga. Dhamaan sahayda loo baahan yahay, sida dabaasha iyo bareegyada korontada, ayaa la heli doonaa. Inta lagu jiro barnaamijka intiisa kale (Wajiga 2 iyo 3), dhallinyaradu waxay guriga joogi doonaan habeen kasta.
Macluumaadka Akhriska waa fursad loogu talagalay ka qaybgalayaasha iyo waalidka ama masuulka inay helaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan NCS iyo in ay waydiiyaan wixii su'aalo ah ee ay ka qabaan barnaamijka. Sidoo kale waa fursad ay kula kulmaan dhalinyarada kale ee ka qayb qaadanaya barnaamij isku mid ah, iyo waalidkood ama masuulka.
Waxaan kuu soo diri doonaa martiqaad loogu talagalay Macluumaadka Akhriska marka goobta la xaqiijiyay. Waxaa badanaa la qabtaa toddobaadyo XNUM ka hor inta uusan barnaamijku bilaabmin. Waxaan kugula talineynaa in aad ka soo qayb gasho ka qaybgalayaashii horey u soo helnay wax aad u faa'iido leh, ma aha khasab in kastoo. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuu soo diri doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xagaaga xagaaga / dayrta oo ku saabsan hal bil kahor taariikhda barnaamijka bilawga ah ee boostada ama boostada, inta badan waxay ku xiran tahay mudnaanta arjiga codsiga.
Waxaan aamminsanahay in dhammaan ardayda xaqa u leh 15-17 inay mudan yihiin inay ka qeyb qaataan NCS waana qiimo weyn lacagta. Dawladdu waxay ku maalgelinaysaa £ 1,000 qof kasta oo ka qaybgalayaasha ah si aan u hubinno in barnaamijka aad ka badan tahay £ £ 50 lacag bixinta, haddii aad ka dalbato NCS Challenge ama NCS Trust. Ka qaybqaatayaashu waxay guriga ka joogaan wakhti firfircoon oo dhan. Tani waxaa ku jira hoy, cunto (markaad ku jirto marxaladda degaanka) iyo qalabka.
Waxaan badanaa bixinnaa dalabyo gaar ah oo loogu talagalay dugsiyada aan booqanno. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan kaalmada dhaqaale ama lacag bixinta fadlan nala soo xiriir.
Ujeeddadu waxay tahay inay taageerto kuwa leh dabeecadaha adag inay u oggolaadaan inay ka qayb qaataan oo ay helaan ugu wanaagsan ee NCS.
Sababtoo ah amnigu waa dareenka ugu weyn, waxaan dib u eegeynaa codsiyada qof walba, gaar ahaan dareenka macluumaadka caafimaadka iyo taageerada ee la bixiyey.
Haddii loo sheego in qof dhalinyaro ah uu ku adag yahay inuu raaco xeerarka cad iyo xuduudaha, waxaan la xiriiri doonaa waalidka ama wakiilka si aan ugala hadalno tan. Mararka qaarkood waxaan la xiriiri doonaa dugsiyada, khabiirada ama khabiiro kale oo ku takhasusay macluumaad dheeraad ah. Waxaan markaa go'aan ka gaarnaa qofka dhalinta yar iyo inta taageerada ay u baahan yihiin NCS. Haddii loo baahdo, waxaanu siin doonaa taageero dheeraad ah oo loogu talagalay qofka dhalinta yar.
Dhammaan kiisaska, waxaanu samayn doonaa shaqaale muhiim ah oo ka warramaya dabeecad kasta oo adag si ay u taageeri karaan qofka dhalinta yar, iyo kooxda oo dhan. Waxaan sidoo kale heysanaa xeer anshax. Waxan u sharxi doonaa dhalinyarada bilawga barnaamijka waxaanan ka fileynaa inay raacaan. Xeerka anshaxa waxaa ku jira xeerar ku saabsan habdhaqanka aan ka fileyno barnaamijka, oo ay ku jiraan shuruucda ammaanka, sharciga, iyo ixtiraamka iyo dadka kale.
Haddii qof dhallinyaro ah si dhab ah ama si joogta ah u jebiyo xeerka anshaxa, shaqaalaha ayaa qiimeyn doona xaaladda waxayna go'aan ka gaarayaan tallaabada ugu habboon. Xaaladaha qaarkood, waxaan ka codsan karnaa qofka dhalinta yar in uu ka baxo barnaamijka.
Badbaadada iyo wanaaga ka qaybgalayaashu waa muhiim. NCS waxaa la bixiyaa dhamaan England iyo Northern Ireland by shabakada khibradaha dhalinyarada iyo ururada bulshada oo ay ka mid yihiin hay'adaha samafalka, wadaxaajoodka jaamacadda, shaqada iskaa wax u qabsashada, bulshada, shirkadaha bulshada (VCSE) iyo iskaashiga qaybaha gaarka ah. Shaqaalaha NCS waxay yihiin DBS oo la hubiyay (hore CRB) waxayna leeyihiin tababar ku haboon inay la shaqeeyaan dadka da'da yar.
Dhammaan hawlaha waa kuwo halis ah oo la qiimeeyo oo la kormeero tababarayaal si taxadar leh loo soo tababaray iyo hagayaal iyo barnaamijkuna waa tayada la xaqiijiyay ee gudaha iyo qaranka.
Ka qayb qaadanayaan NCS waxay faragelinayaan waxbarashada dhallinyaradeyda ah?
Maya. Barnaamijka xagaaga ee NCS wuxuu dhacayaa fasaxyada xagaaga. Dayrta gaaban iyo barmaamijyada gaaban waxay ka dhici karaan meel kasta xilliga dayrta ama gu'ga fasaxyada nuska ah.
Barnaamijka xagaaga ee NCS wuxuu ka dhacaa fasax xagaaga. Dayrta gaaban iyo barmaamijyada gaaban waxay ka dhici karaan meel kasta xilliga dayrta ama gu'ga fasaxyada nuska ah.
Sidee ayaan u helayaa dhalinyaradayda ku lug leh?
Dhallintaada waxay diiwaangelin karaan danahooda inay ka qaybqaataan adiga oo isticmaalaya bogga bogga ee shabakadayada ama adoo wacaya 0114 2999 210 ama annaga oo soo diri doona maamulaha NCS maamulaha, Richard at richard.r@element.li
Marka diiwaangelintu dhammaato, waxaanu kuu soo diri doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mashruuca gaarka ah ee ay saxiixeen.
Tallaabo wadajir ah oo ka dhan ah Dambiyada Kufsiga oo furan
Fursadaha Aasaasiga ee NCS - Akhri kani si aad uga qayb qaadato!
SUMMER 2018 DALKA 3
SUMMER 2018 DALKA 2
Xisbiga NCS Sheffield 2018